सहमति Archives - Lokpati.com
Tag - सहमति
निजामती कर्मचारीको सामूहिक राजीनामा स्वीकृत गर्ने सहमति
काठमाडौं, २२ साउन। निजामती कर्मचारीहरुको राजीनामा स्वीकृत हुने भएको छ। निजामती कर्मचारीहरुको सामूहिक राजीनामा दिए सरकारले स्वीकृत गर्ने अब कानूनी व्यवस्था हुने भएको छ।
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका...
नेपाल र बङ्गलादेशबीच जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने सहमति
काठमाडौं, ७ असार । नेपाल र बङ्गलादेशले संयुक्त रुपमा उपयुक्त र सम्भाव्य देखिएका जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने भएका छन्।
शुक्रबार ढाकामा सम्पन्न दुई देशका ऊर्जा सचिवको संयुक्त बैठकले सरकारले २०७५ वैशाखमा जारी गरेको...
नेकपाकाे आधिकारिक कार्यदिशा जनताकाे जनवाद
काठमाडौं, ६ असार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच महाधिवेशनसम्म पार्टीको कार्यदिशा जनताको जनवाद नै मानेर जाने सहमति भएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा...
नेकपाको जनसंगठनमा सहमति : कसको भागमा कुन संगठन ?
काठमाडौं, ०२ जेठ । बालुवाटारमा बिहीबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले जनवर्गीय संगठनको भागबण्डा टुङ्ग्याएको छ । बैठकले नेकपामा २२ जनवर्गीय संगठन मध्ये धेरैजसोको भागबन्डा टुंग्याएको हो ।
अनेरास्ववियूको संयोजकमा पूर्व एमालेबाट...
प्राधिकरण र इञ्जिनियरबीच सहमति, सहमतिमा के छ ?
काठमाडौं, १६ वैशाख । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र पुनर्निर्माणमा कार्यरत प्राविधिकहरुबीच सहमति भएको छ। सहमति भएसँगै कार्यरत प्राविधिकहरु काममा फर्कने भएका हुन्।
नेपाल इन्जिनयर्स एशोसियसनको मध्यस्थातामा राष्ट्रिय...
चार कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता गर्ने सहमति
काठमाडौं, १० वैशाख । विभिन्न चार कम्युनिष्ट पार्टीबीच कार्यगत एकता गर्ने सहमति भएको छ। मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), सुलभ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट...
सीके राउतसँग गरिएको ११ बुँदे सहमति (पूर्णपाठ)
काठमाडौं। सरकारले स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नेता सीके राउतसँग ११ बुंदे सहमति गरेको छ। सहमतिमार्फत् गठबन्धन राजनीतिको मुलधारमा आएको छ। सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र गठबन्धनका तर्फबाट सीके राउतले...
जेल महाविद्यालय रहेछ : सिके राउत
काठमाडौं। स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नेता सिके राउतले समुदाय समुदायसँग नलडाउने सपना पूरा नहुने बताएका छन्।
‘हामीले पनि स्वतन्त्र मधेशका लागि जनमत संग्रहका लागि गरौं भन्ने माग थियो। यो सरकारले पनि स्वीकार गरेको छ’ राउतले भने...
हामी बुद्धका सन्तान हौं : सिके राउत
काठमाडौं। स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नेता सिके राउतले आफूले तीन करोड नेपालीको खुसी लिएर मुलधारको राजनीतिमा आएको बताएका छन्।
‘२०६९ साल जेठ ८ गते काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलन गरेका थियौं। हाम्रो आन्दोलन कता जाला ...
कुमारी इक्विटी फण्डको एकाईका लागी आवेदन दिने म्याद थप